अनुपराज शर्माकाे प्रश्न- मानवअधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्ने कि नखोस्ने ? « रिपोर्टर्स नेपाल
अनुपराज शर्माकाे प्रश्न- मानवअधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्ने कि नखोस्ने ?
प्रकाशित मिति : 2022 June 23, 5:36 pm
काठमाडौं, ९ असार : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ देखि संसदमा विचाराधीन छ । पुर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १० वैशाख २०७६ मा ल्याएको यो विधेयक आयोगको प्रशासनिक र कानुनी अधिकार कटौती गर्ने प्रावधानका कारण विवादित छ ।
किन अमेरिका नजाने भए प्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौं, ९ असार । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अन्ततः अमेरिका भ्रमण नजाने भएका छन् । उनी
काठमाडौं, ९ असार : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६
काठमाडौं, ९ असार :मोहितवंश आचार्य र मेलिना राईको स्वरमा रहेको नयाँ गीत ’भटक भटक’ सार्वजनिक